ကတိကဝတ်ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ငွေကျပ် သိန်း (၄၀) ပေးအပ်ရန် တောင်းခံနေရတဲ့ အောင်သူလွင်
အောင်သူလွင်လို့ ခေါ်တဲ့ Kelvin Kate ဟာ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေကြား ဟာသဗီဒီယိုတွေဖန်တီးပြီးနာမည်ကြီးလာခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ စတင်နာမည်ကြီးလာချိန်မှာတော့ အကိုဖြစ်သူ အောင်ရဲထွေးတို့နဲ့အတူ ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ခွဲထွက်ပြီး တစ်ဦးတည်း ရပ်တည်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ဟာသဗီဒီယိုတွေဟာ ကြည့်ရှုသူတွေအတွက် စိတ်အပန်းဖြေစေပြီး ရယ်မောပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိစေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက သဘောကျနှစ်ခြိုက်နေကြရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်သူလွင်ဟာ လူပျိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ နောက်ကြောင်းအမှန်ကိုတော့ မကြာသေးခင်ကမှ ဇနီးဖြစ်သူ ပိုးအိက ချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်သူလွင်ဟာ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ တရားဝင်ဇနီးမယား တစ်ယောက်ရှိကြောင်းနဲ့ အိမ်တွင်းရေးပြသနာရပ်တွေအားလုံးကို ဇနီးဖြစ်သူက ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုဖော်ထုတ်မှုတွေနောက်မှာတော့ အောင်သူလွင်တစ်ယောက်ဘာမှဖြေရှင်းခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ သူလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကိုပါ ယာယီပိတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဒီဖေ့ဘုတ်အကောင့်ကနေပြီးတော့ လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ ကြော်ငြာတွေကိုကြေငြာပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖေ့ဘုတ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းသွားခြင်းကြောင့် လက်ခံထားတဲ့ ကြော်ငာလုပ်ငန်းတွေမှာ သွားပြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့် ကြေငြာမှုပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်မှာလည်း ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတော့ အောင်သူလွင်ကို ကတိကဝတ်ပျက်ကွက်တာကြောင့် လျော်ကြေးအနေနဲ့ သိန်း(၄၀) ပြန်လည်ရရှိလိုကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
“Kelvin Kate ခေါ် (အောင်သူလွင်)… ဆက်သွယ်ပါ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထားတာ. . .ကလေးကစားစရာလုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ကောင်းမြတ်ဟိဏ်း မနောသူ ယာဉ်လိုင်းကြေငြာတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာ . . .မနက်ဖြန်ဆို တလ ပြည့်ပါပြီ ။စာချုပ်မှာ (10)ရက် ရမယ်ပြောထားတာတောင် ရက်20လောက်စောင့်ခဲ့ပြီးပြီ. . . ဟိုနေ့ရမယ် ဒီနေ့ရမယ်ပြောပြီး လုံးဝအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲ ဖုန်းပါ စက်ပိတ်သွားတဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းပေါ်မှာ ဖြစ်ကတက်ဆန်း လုပ်နေတယ်ဆိုဒါ သိသာထင်ရှားပါတယ် ။မနက်ဖြန် ကြေငြာဗွီဒီယို မထုတ်ပေးနိုင်ရင် ပေးထားငွေ သိန်း (40)ပြန်လိုချင်ပါတယ်. . . ကျန်တဲ့ကုန်ကျမှုပိုင်းက မတောင်းတော့ပါဘူး ။ စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေသိန်း 60နီးနီးကုန်ထားပါတယ် ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို လေးစားတယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ပါ. . . ” ဟူ၍ ပို့စ်တင် ရေးသား တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။We Love Cele
ချစ်သူကို တရားဝင် ချပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲဝင် ဆိုဖီယာ
မိန်းမစင်စစ်တွေ အရှံးပေးရလောက်တဲ့ အလှဆုံးသော လိင်ပြောင်းလဲထားသူ (၁၀) ဦး
လှိုင်သာယာပစ်ခတ်မှုမှ လက်ထိတ်ခတ်ခေါ်ဆောင်ခံရသူတစ်ဦး ထပ်မံသေဆုံး